91 India | RayHaber | raillynews
Guji waddamada khariidada si aad u akhrido warka tareenada Hindiga, waddada iyo wadooyinka Asia!
27 Koonfur Afrika
Diiwaanka-jabsiga Dunida Qaaska ee 5
Tareenada, oo ka mid ah gaadiidka dadweynaha ee ugu da'da weyn adduunka, ayaa nolosheena ku jiray qarniyo badan. Kobcinta iyo beddelka tareennada tikniyoolajiyadda kobcinta ayaa inta badan la door bidaa marka loo eego labadaba rarka iyo rakaabka. in Waxaad [More ...]
16 Dhaawacmay Labo Rakaab Oo Tareenka Ku Dhintay India
Laba Burbur tareen oo rakaab ah oo ka dhacay India 16 Dhaawac ah; Hindiya gudaheeda, tareenka rakaabka ayaa buriyay oo ku dhacay tareen kale oo rakaab ah. Dadka 16 ayaa ku dhaawacmay shil tareen oo ka dhacay Hyderabad. Shil ka dhacay magaalada Hyderabad ee Telangana [More ...]
Maalgelinta Dhaqaalaha Hindiya iyo Nidaamka Tareenka: Jamhuuriyadda Hindiya waa meesha toddobaad ee ugu weyn adduunka juqraafi ahaan iyo dadka labaad ee ugu ballaaran. Dadku waa bilyan 1,3, bedduna waa 3.287.259 km². [More ...]
Mashruuca Tareenka Indhaha ee Mumbai Ahmedabad
Mashruuca Tareenka Indhaha ee Mumbai Ahmedabad: Mumbai Ahmedabad Bullet Mashruuca waa mashruuc taariikhi ah oo xawaare aad u sarreeya oo Hindiya ka kooban oo dhererkiisu yahay 508.17 km dhererkiisu yahay 12 Station. Magaca Mashruuca: Mumbai-Ahmedabad Tareenka Xawaaraha Sare [More ...]
Wadada Tareenka Xawaaraha Sare ee Hindiya
Khariidadda Xawaaraha Xawaaraha Sare ee Hindiya: Hindiya waxay yeelan doontaa khad keliya oo xawaare xawaare sare leh oo ku socon kara tareennada xawaare ka sarreeya 250 km / h. Ku wareejinta tiknoolajiyadda tareenka rasaasta Japan ee Hindiya [More ...]
Maroodiga Oo Dilaya Tareenka Hindiya. Hindiya gudaheeda, tareen xawaare badan ku socda ayaa ku dhuftay shabag kalluun oo ku soconaya biraha. Maroodiga, oo si xun u waxyeeleeyay saamaynta, ayaa u aaday keynta si uu iska haysto. Shil, Waqooyiga Bengal [More ...]
Hindisaha Cusub ee Bilayska Cusub ee Cusub
Tareenka cusub ee xawaaraha sare ee Hindiya ayaa jabay socdaalkiisii ​​ugu horreeyay maalin uun ka dib markii uu caleema saaray Raiisel wasaare Narendra Modi. 180 mayl saacaddiiba qeybta tareenka xawaaraha dheereeya ee Hindiya iyo tijaabooyin [More ...]
Xoogaga Mujaahidiinta Al-Qacida oo lagu xiray 7
Sagaal gaari oo rakaab ah oo tareen laga raacay Bihar, India. 7 qof ayaa la dilay iyo 29 dad ayaa dhaawacmay. Burbur tareen rakaab ah oo ka dhacay gobolka Bihar ee bariga Hindiya [More ...]
63 Codsiyada Million ee loogu talagalay Shaqaalaha 19 ee kunoolada Shaqaalaha Tareenada Si Shaqaalaysi Loogu Keeno Hindiya
Gudaha Hindiya, jidadka tareenadu waxay fureen shaqaale gaaraya 63 kun oo qof. 63 19 milyan oo qof ayaa shaqo codsaday kun kun oo qof.Waxa ka mid ah codsadayaasha sidoo kale waxaa jira dad haysta shahaadada heerka labaad. In Turkey, tiro kooban oo [More ...]
Hindiya, Tareenka wuxuu u baxaa ido ido ah
Markii uu tareenka yimid India, daraasiin ido ah ayaa weerartay wadooyinka. Idaha daaqa ee daaqa cagaarka ah ee kuyaala geeska India ayaa cabsi weyn kaqatay dhawaqa tareenka. Ido go'doon ah oo isku dayaya inay ka baxsadaan tareenka [More ...]
5 In India 406 Qofkii Noloshiisa Lumin Lahaa By Tareenada on Tareenada
Taliyaha Booliska Hindiya (GRP) Niket Kaushik ayaa sheegay in sanadkaan tirada dadka ka soo dhacay tareenada magaalada Mumbai (Bombay) ay kordheen marka loo eego sanadkii la soo dhaafay. Niket Kaushik, laga bilaabo Janaayo ilaa Juun ee sannadkan [More ...]
14 oo ku dhimatay Baska Iskuulka Baska ee Hindiya
Hindiya, tareen rakaab ayaa ku dhacay baska dugsiga. Warbaahinta maxalliga ahi waxay soo warisay in tareenka uu ku dhacay tareen ay dhigtey ardayga 22 oo ku yaala heerkulka wadada. 13 dadka oo ay ka mid yihiin ardayda 14 iyo darawalada ayaa lumiyay noloshooda. [More ...]
Wagooyooyinka Rakaabka ah ee Hindiya Shirkadda Gawaarida iyo Mashruuca 11 Km
Gawaarida 22, oo ka tagtay tareen ku yaal India, ayaa ka baxay gacantooda, baabuur madhan oo kun kun rakaab ah ayaa lagu joojin karaa iyada oo dhagxaan waaweyn la dul dhigay jidka. Sida ay soo warinayso BBC-da, gobolka Orissa oo ka tegaya aagagga ganacsiga [More ...]
RayHaber 22.01.2020 Warbixinta Shirka